Kọmpat coft feed line nke presses China Manufacturer
Nkọwa:Ntọala oghere nchekwa Space,Line nri ndepụta zuru ezu,Ahịrị Nri Ahịrị
Home > Ngwaahịa > Pịa Nri na Ngwunye Ngwá Ọrụ > Kọlụm nri nri > Kọmpat coft feed line nke presses
Kọmpat eriri igwe nri akara STA MPING AKUKO
Mkpịsị aka ntanetị nke na-ahụ maka njikwa ngwa mgbakwunye PLC bụ nye igwe na-enye ihe na-akpaghị aka nke na-enye ihe ọkụkụ na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-aga n'ihu na-ejide ya. igwe ihe na-adọ adọ ma ọ bụ leveler. Na mkpokọta, ejiri otu akaghị tupu usoro ịmegharị ya ka enwere ike ịnweta ọnya na-egbu oge kwa nkeji na stamping.
Stgbọala, ihe eji arụ ọrụ, kọmpụta na kọmputa, ihe ngwaike na akụkụ igwe wdg.
Akụkụ omogbọala: Bracket, Damper, Barke Pad, Tie Bar, ngwa eletriki, Akụ nke mpempe akwụkwọ, okpo komputa, mkpọda oche nke ụgbọ ala, sọks ahụ nke ụgbọ ala wdg.
Ngwaahịa : Pịa Nri na Ngwunye Ngwá Ọrụ > Kọlụm nri nri
Ntọala oghere nchekwa Space Line nri ndepụta zuru ezu Ahịrị Nri Ahịrị Oghere Usoro nchekwa igwe Nweta eriri igwe nke SpaceMaster Nweta Nchekwa onwe Coil Straightener-feeder Chekwa Floorspace Ejikọtara Uncoiler na Straightener